Iphaneli yencindi yesandwich yefektri | I-china i-honeycomb yeepaneli zesandwich abavelisi, abaxhasi
50mm 75mm 100mm ubukhulu bephepha lenqatha lenesangweji yegumbi lokucoca igumbi lesibhedlele elixuba amayeza ICU
Inkqubo yodonga egumbini ecocekileyo yibhodi edibeneyo eyenziwe ngeshiti yentsimbi enombala ngokwezinto ezahlukeneyo ezingundoqo. Amacala amane ebhodi aqinisiwe kwaye atywinwa ngokutywinwa komphetho. Indawo yokusebenzela ivaliwe kusetyenziswa ibhodi yokuhlanjululwa, kwaye ezinye iinkqubo zinokusetyenziselwa ukuqinisekisa ucoceko oluthile. Isixa sendawo yokuhlangabezana nomgangatho wokuqhubekeka kwamashishini ahlukeneyo njengokutya, amayeza, izinto ze-elektroniki kunye nezinye iimveliso. Yamkela iphepha lomgangatho wePCGI elungileyo kunye nokugcwaliswa kwe-EPS. Isandla esenziwe nge-GI okanye isakhelo sephrofayili yeAluminiyam.
Kukulungele ukufakela kunye nokuqhaqha, ukusebenza kakuhle okubanzi.
Iphaneli yesandwich yobusi bealuminium enebhodi ephindwe kabini yemagnesium oxide
ukukhanya kwesinyithi seplastikhi kwiphaneli yesandwich yeplastikhi yeplastikhi yepaneli edityanisiweyo yodonga kunye nokuhombisa
Iphepha lenqatha lenqatha lenqwanqwa elingenamlilo kunye nebhodi ephindwe kabini yemagniziyam ye-oxide yesibhedlele yokutya okuxuba ukutya
Iphaneli yesandwich yesinyithi engenasici
Yamkela i-PCGI esemgangathweni yephepha lomgangatho kunye nokugcwalisa inyosi. Isandla esenziwe nge-GI okanye isakhelo sephrofayili yeAluminiyam.